Indonesia: Duullimaad diyaaradeed oo loo hakiyay wax usoo uray rakaabka
Thursday November 08, 2018 - 09:20:33 in Wararka by Mogadishu Times
Diyaarad laga leeyahay dalka Indonesia ayaa si ku meel gaar ah duullimaadkeeda loo hakiyay ka dib markii rakaabki saarnaa ay ka cawdeen qurmuunka raashin diyaaradda saarnaa. Qiyaastii 2 tan oo ah nooc ka mid ah miraha la cuno ayaa xamuul ahaan u s
Diyaarad laga leeyahay dalka Indonesia ayaa si ku meel gaar ah duullimaadkeeda loo hakiyay ka dib markii rakaabki saarnaa ay ka cawdeen qurmuunka raashin diyaaradda saarnaa. Qiyaastii 2 tan oo ah nooc ka mid ah miraha la cuno ayaa xamuul ahaan u saarnaa diyaaraddaasi oo ka tageysay magaalada Bengkulu, kuna sii wajahneyd magaalo madaxda dalka Indonesia ee Jakarta. Dadkii rakaabka ayaa codsaday in raashinkaas laga saaro diyaaradda, iyagoo qaarkoodna ay ku dhawaadeen iney la dagaallamaan howl wadeennada diyaaradda.
Mas'uuliyiinta shirkadda diyaaradda ayaa ugu dambeyn dajiyay xaaladda waxayna ka bixiyeen dhammaan kartoonnadii ay ku jireen miraha raashin ahaanta loo cuno.
Duullimaadka ayaa goor dambe baxay abaare 11-kii caweysnimo ee xilliga dalkaas, hase ahaatee wuxuu muddo 1 saac ah ka dib dhacay wakhtigii loogu tala galay.
Madaxda shirkadda Sriwajiya Air oo iska leh diyaaradda ayaa bayaan ay saacado ka dib soo saareen waxay ku sheegeen in diyaaraddu ay xaq u lahayd iney qaaddo badeecadaas.
Lahaanshaha sawirkaGETTY IMAGES Image caption Mirtan ayaa kamid ah miraha ugu qurmuuunka badan dunida
Lahaanshaha sawirka AMIR ZIDANE Image caption Markii dambe raashiinka diyaaradda ayaa laga saa ray
"Sharci darro ma aha in duullimaadka la saaro raashinkaas, maadaama si wanaagsan loo xir xiray lana waafajiyay shuruucda, diyaarado fara badan ayaana sidan sameeya" ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay sarkaal ka tirsan maamulka sare oo lagu magacaabo Retri Maya.
Bayaankan ayaa lagu soo daabacay wargeys ka soo baxa magaalada Jakarta.
Miraha nooca loo yaqaanno Durian ayaa aad looga yaqaannnaa dalalka ku yaalla qaaradda Aasiya waxayna dadka u kala qeybsanyihiin kuwo jecel iyo kuwo neceb oo ka sheegtay sida uu u soo uro.
Sawirro: Waxyeellada ay geysatay duufaanta Tsunami
Muslimiinta Jakarta oo loogu baaqay inay maayar Muslim ah doortaan
Dalalka qaarkood ayaa mamnuucay in la geeyo goobaha ay dadweynaha ku badanyihiin iyo huteellada ama in lagu qaado gaadiidka shacabka noocyadiisa kala duwan.
'yaa diyaar u ah inuu duullimaadkan raaco?'
Qof ka mid ah dadkii rakaabka ahaa ayaa barta Facebook-ga uga warramay dhacdadaas oo ku soo beegantay maalintii Isniinta ahayd ee toddobaadkan.
"Marki aan galay diyaaradda, waxaa durba ii soo uray miraha. Waxaan cabasho u gudbiyay shaqaalaha diyaaradda laakiin waxay igu dhaheen waa inaad buuxisid warqad lagu qoro cabashooyinka" ayuu yiri Amir Zidane.
Howl wadeennada ayaa u sheegay in urka uu iska dhammaan doono isla marka ay diyaaradda hawada gasho.
Balse Amir oo aan arrintaas ku qancin ayaa go'aansaday inuu abuuro buuq wuxuuna dadkii kale ee rakaabka ahaa ku boorriyay iney ka dhiidhiyaan.
"Waxaan ku qeyliyay rakaabki kale anigoo dhahaya 'Yaa diyaar u ah inuu duullimaadkan raaco? Kulligoodna waxay dheheen anaga ma raaceyno!!'" ayuu yiri.
Intaas ka dib, dadkii kale ayaa si wada jir ah u gudbiyay cabashada ay qabaan iyagoo diiday iney diyaaradda raacaan haddii waxa uraya laga dajin waayo.
Dhacdadan ayaa ku soo beegantay hal toddobaad un ka dib markii ay dalka Indonesia ku burburtay diyaarad rakaab ah oo ay ku geeriyoodeen ku dhawaad 190 ruux.